CC Warsame: “Deni wuxuu fashiliyey shirqoolka Farmaajo” | KEYDMEDIA ONLINE
CC Warsame: “Deni wuxuu fashiliyey shirqoolka Farmaajo”
Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay Khudbadii uu xalay jeediyay Masaxweynaha Maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni.
MUQDISHO, Soomaaliya – Hoggaamiyaha Xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa ka hadlay Khudbada Madaxweyne Deni wuxuuna sheegay inay dibada soo dhigtay xaqiiqooyin, xanuun badan oo la xariira taliska muddo xileedkiisu dhacay.
“Waxaan isku tirinayey dadka xilli hore fahmay Farmaajo, laakiin fahamkaygu wuxuu ka imaanayey u kuur-gelidda hab-dhaqankiisa, fasiraadda ficiladiisa, iyo xogta aan ka helo kooxdiisa. Madaxweyne Saciid wuxuu iiga duwanaa in dareenka tebineed ee khudbadiisa uu ahaa mid ka imaanaya waayo-aragnimo iyo falgal toos ah uu isagu u joogay”. Ayuu yiri Warsame.
CC Warsame wuxuu xusay in hadalka Deni uu yahay digniin, loona baahan yahay in ay ku waano qaataan dadka Xamar deggan ee ku dagan Kali-taliska waqtigu ka dhamaaday ee doorasho boobka iyo dagaalada isku diyaarinaya.
“Saciid wuxuu garaacay gambaleel digniin ee halista uu dalku marayo. Waxaa lagaa yabaa in qolada Xamar joogta ay horay u yaraysanaysay khatarta Farmaajo ka iman karta, ama ay isku halaynayaan beesha Caalamka, halka in kale ay is leedahay waqtigiisii waa dhammaaday doorasho ayuu ku baxayaa”. Ayuu sidoo kale yiri CCWarsame.
Warasme wuxuu sheegay in Farmaajo uusan dan iyo hello ka lahaynd xukumidda goobo ka baxsan Xamar iyo Beydhabo, isla markaana uu Saciid Deni ku yiri iga leexo aan dadka degaanaaas xukumee, hayeeshee uu Deni uga digay reer Puntland in ay ka digtoonaadaan wixii dalka ka dhacay Siddeetankii.
“Saciid wuxuu sawir ka bixiyey muuqaalka siyaasadeed ee Farmaajo oo leh, walaalow maxaa iga rabtaa haddii aan qolada Xamar iyo Baydhabo xukumayo? Iyo saciid oo leh haddii aad kuwaas xoog iyo cabsi ku xukuntay, inaga iyo Somaliland tii hore ayaad noo celin rabtaa, waa halka uu dadkiisa uga digay in mar kale 80kii oo kale ay ka foojignaadaan”.
“Farmaajo duulaankii uu hoygayga ku soo qaaday 17kii Dec 2017, iyadoo xilkiisu bilaw yahay, iyo weerarka uu Khamiistii 18/02/21 Hotel Maa’ida ku qaatay, isagoo muddo xileedkiisa dhammaaday, ayuu ku tijaabiyey falceliska ka imaan kara Muqdisho”. Ayuu qoraalkiisa ku yiri hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir.